Mengi nguva nguva WMI Repository inonyangadza inoguma Mukusakundikana Kwekupa Mutoro. Muchirongwa ichi, tichagovera maitiro kugadzirisa kana kuvakazve WMI Repository on Windows 10. Avo vasingazive, Windows Management Chishandiso kana WMI seti yezvinotsanangurwa kubva kuMicrosoft kusimbisa manejimendi emidziyo uye zvinoshandiswa munetiweki. Iyo dhatabhesi inochengeta meta-ruzivo uye tsananguro ye WMI makirasi. Kungoshandisa izvi chete, mamiriro ezvinhu ezvirongwa anogona kuzivikanwa.
Inzvimbo inowanikwa pano -% windir% System32WbemRepository. Nenguva pfupi, inopa vashandi kuguma kwehutano hwemakombiyuta epanzvimbo kana kure.
chitsamba: Usashandise izvi paMashini 2012 Cluster
Gadzirisa kana kuvaka zvakare iyo WMI Repository pa Windows
Pano pane mirayiridzo yemirairo yekugadzirisa kana kudzorera WMI repository. Zvisinei, Microsoft inoratidza kuti zvakanakisisa zvaunofunga kana pane uori.
Pasi pane urongwa hwekanganiso uye mvumo yaunogona kuona-
Haikwanise kushamwaridzana nemidzi yakashata kana rootcimv2 namespaces. Iyo inokundikana nekodhi yekodzero "0x80041002" inotaura ku "WBEM_E_NOT_FOUND."
Paunotanga Computer Management uye Right Click pane Computer Management (Local) uye sarudza Properties, unowana mhosho inotevera: "WMI: Haisati Yawanikwa" kana inosungirira kuedza kubatanidza
Kuedza kushandisa wbemtest, uye inosungirira
Schemas / Zvinhu zvinoshaikwa
Simba rekubatanidza / kushanda kwemabasa (0x8007054).
Nzira yekupedzisira yekuongorora ndeyokushandisa murairo uyu mune yakakura Command Prompt.
Kana iyo repository ine dambudziko, ichapindura "repository haisi yakakwana, "Kana zvisingazove zvakadaro chimwe chinhu chinokonzera dambudziko. Iye zvino zvaunoziva kuti uori huripo ngatitevere mazano ekugadzirisa kana kuvakazve WMI repository.
1] Sarudzazve WMI Repository
Vhura Command Prompt pamwe neropafadzo dzakakwirira.
Zvino itaira murairo kuti uone kana iko zvino ichidzoka sekusagadzikana-
Kana ichiti izvozvo Repository haisi yakakwana, saka unoda kumhanya:
Ichakubatsira iwe kugadzirisa WMI repository. Heinoi chimwe nechimwe che WMI inorayira zvinoreva:
salvagerepository: Iyi sarudzo kana inoshandiswa nemutambo winmmgmt inobata chengetano chekuongorora. Kana kusakanganiswa kunoonekwa, inovaka zvakare nzvimbo yekuchengetedza.
verifyrepository: Inoita chenguva dzose chekuongorora paWMI repository.
resetrepository: The repository inodzorerwa kune imwe nyika yekutanga apo inoshandisa system inotanga kuiswa
Tarisiro inotsanangura zvinoitika kana iwe ukaita mirairo.
2] Simba Dzorera WMI
WMI inouya nehutachiona hwekuzvidzivirira. Apo basa reWMI rinodzorera kana kuona huori chero hupi, hutano hwekudzorera huchaita huchitsvaga. Zvinouya nenzira mbiri:
AutoRestore: Pano ichashandisa mifananidzo yekuchengetedza kana i VSS (Bhuku Shadow copy) kuchengetedza yakashandurwa.
AutoRecovery: Mune izvi, kuvakwa kwekuvakazve kuchaita mifananidzo itsva yeRepository yakabva kuMMoF yakanyorwa. IMoFS inowanikwa mubhuku rekunyora pano:
HKLMSoftwareMicrosoftWBEMCIMOM: Dzidzirai MOFs
Cherechedza: Kuziva kuti MOFs inokosha. Bhinda kaviri pairi kuti uone kukosha.
WMI Kuzvidzorera hakushandi
Kana kuzvidzorera kusingabatsiri, unogona kushandisa nguva yekugadzirisa-kushanda.
Tarisa regkey value haina chinhu kana kwete pano:
Kana iri regkey iri pamusoro iri isina, kopi-gadzira purogiramu yeReckey kubva kune imwe mashini. Iva nechokwadi kuti inobva kuSystem iyo yakaenzana nekombiyuta iri mubvunzo.
Zvadaro, ita murairo-
Kana ukawana kukanganisa "WMI repository reset yakakundikana. Nzira yekutadza: 0x8007041B. Chivako: Win32 ", uye mirai zvose Dependency Services pane wMI service nekuita mirairo inotevera:
Kana zvose zvigadziriswa zvinoratidzika zvisingashande, nguva yaunoshandisa chigadziriswa chekushandisa.
Ichi chigadziri chichagadzira Server WMI Repository kana yakasvibiswa kana kuti ine hukama hwakaburitswa. Unogona kukopa WMI Fixer Tool kubva Technet.
Raira R kusashanda! Maitiro ekudzorerazve macOS kana Kudzorera kusingashande